Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo loogu baaqay inay is dajiyaan – Radio Muqdisho
Wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koofur Africa ayaa waxaa ay kulan looga hadlayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dadka wadankaasi soo galootiga ku ah la qaadatay safiirada dalalka caalamka u fadhiya Dalkaasi.
Qunsulka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire ayaa sheegay in mas’uuliyiinta Wasaaraddu ay u gudbiyeen cabasho ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka lagu hayo dadka ajaanibta ah, iyagoo sheegay inay ka xunyihiin falalka ka dhacaya dalkaasi, loona baahanyahay in wax laga qabto.
“Waxaan ka codsanay in wax laga qabto falalka lagu bartilmaameedsanayo dadka ajaanibta ah, runtii waxa dhibka wada waa dhallinyarro is abaabushay oo tuugo u badan, mana ahan ciidan soo duulay, waxayna noo balan qaadeen in ay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka dadka ku howlan” ayuu yiri Maxamed Cali Mire.
Qunsulka ayaa xusay in dowladda Koonfur Afrika ay ka codsadeen sidoo kale in laga hortago dhibka lagu hayo dadka ajaanibta, waxaana uu ugu baaqay Jaaliyadda Soomaaliyeed inay is dajiyaan.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa isa soo tarayay dhibaatooyinka loo geysanayo ajaanibta ku dhaqan dalka Koonfur Afrika oo ay Soomaalda ku jirto, iyadoo boob iyo dil loo geysano ajaanibta dalka ku sugan, taasi oo ay walaac ka muujiyeen dalal badan oo caalamka ah.